Garsoorihii maamulay ciyaartii Argentina iyo England ee koobka adduunka 1986 oo… – Hagaag.com
Garsooraha reer Tunisia Ali Bin Nasser, oo maamuley ciyaartii caanka ahayd ee Argentina iyo England ee Koobkii Adduunka ee 1986, ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay kaalintii uu ku lahaa ciyaartii uu xiddigga adduunku ku dhaliyey “goolkii Qarniga”.
Maradona, oo dhintay Arbacadii isagoo 60 jir ah, ayaa ka adkaaday ciyaartoy badan oo England ah ka hor inta uusan gool dhalinin isagoo hogaanka u dhiibay Argentina 2-0, afar daqiiqo ka dib markii uu dhaliyay goolka muranka dhaliyay ee Maradona ku sheegay inay ku caawisay “gacanta Ilaah”.
Bin Nasser, oo hadda ah 76 jir, wuxuu sheegay inuusan haysanin wax kala oo doorasho aheyd oo aan ka ahayn inuu aqbalo goolka koowaad. Wuxuu xusuustay sida Maradona uu u siiyay funaanad saxiixan markii ay mar kale kulmeen 2015.
Goolkii labaad ee ciyaarta, Bin Nasser ayaa u sheegay BBC Sport: “Wuxuu ka soo bilaabay xaragada khadka dhexe, anigana si dhaw ayaan u daawanayay. Marka aad maamuleyso ciyaar uu ku jiro ciyaaryahan Maradona oo kale ah, indhaha kama qarsan kartid.”
Wuxuu intaa ku daray, “Waxay isku dayeen inay ridaan 3 jeer intuu xariiftamayey, laakiin hamigiisa ahaa inuu guuleysto ayaa sii waday inuu horey usii socdo.”
‘Guul taariikhi ah’
“Waxaan ka daawanayay banaanka xerada ganaaxa, waxaan la yaabanaa sida uu ciyaartoygan u dhaafay seddex daafac oo uu u orday qiyaastii 50 mitir. Waxaan dhahay daafacyadu waxay isku dayi doonaan inay hadda joojiyaan. Waxaan filayay inay taasi dhacdo waxaana diyaar u ahaa inaan ku dhufto firimbiga rigoore,” Ben Nasser ayaa yiri.
“Si la yaab leh oo aan la yaabay, wuxuu si xarago leh u dhaafay daafac kale iyo goolhaye [Peter Shelton] si uu u dhaliyo waxa noqday goolkii Qarniga.”
Isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu yidhi: “Waxan ku faraxsanahay oo sharafna ii ah shaqsiyan ama garsoore ahaanba inaan ka qeyb noqdo guushan taariikhiga aheyd.”
Bin Nasser ayaa yidhi, “Haddii aan seeriga yeerin lahaa [khalad] la xidhiidha oo u dhexeeya Maradona iyo ciyaartooyda England sababtooda, ma arki lahayn wax sidaasi la yaab u leh. Muuqaalkan aan bixiyay ayaa ka mid ah guulaha aan ku faanayo.”
Ben Nasser wuxuu intaas ku daray in ciyaartii quarter-final-ka ee 1986-kii, oo lagu qabtay in ku dhow 115,000 oo daawadayaal ah hortooda, oo ka dhacday garoonka Azteca ee magaalada Mexico City ay ahayd “midda ugu sarreysa xirfadiisa”, in kasta oo uu go’aansaday inuu aqbalay goolkii ugu horreeyay, kaasoo muran badan dhaliyay.
“Daafaca Ingariiska ah [Steve Hodge] ayaa helay kubbada oo dib u celiyey, Maradona wuxuu hawada kula jiray Peter Shelton, iyaguna waxay iga jireen jihada iga soo horjeedda,” ayuu soo xusuustay.
Wuxuu intaas ku daray, “Waxay wajaheen kaaliyaha garsooraha oo Bulgarian ahaa lana oran jiray Bogdan Duchev.”
“Waan ka labalabeeyey marka hore,” ayuu yiri. “Waxaan eegay Duchev, oo ku soo laabtay khadka dhexe, isagoo xaqiijinaya goolka. Ma uusan i tilmaamin kubada in gacanta lagu taabtay.”
Ben Nasser ayaa intaas ku daray: “Tilmaamaha ay FIFA na siisay ka hor ciyaarta waxay ahaayeen kuwa cad – haddii saaxiibkaa uu ku sugan yahay meel ka wanaagsan taada, waa inaad ixtiraamtaa ra’yigiisa.
Duchev, oo dhintey 2017 isagoo 80 jir ah, mar dambe ayuu yiri “FIFA uma ogolaanin kaaliyeyaashu inay kala hadlaan go’aanada garsooraha.”
Wuxuu carabka ku adkeeyay in “haddii FIFA ay u saari laheyd garsoore reer Yurub ah oo mas’uul ka noqda kulankan muhimka ah, goolkii ugu horeeyay ee Maradona waa la tirtiri lahaa.”
Laakiin Ben Naser waxa uu leeyahay dareenka Isboorti ee ay soo bandhigeen ciyaartoyda England wuxuu ahaa “mid qurux badan”.
Wuu xasuustaa, “Gary Lineker ayaa ii yimid wuxuuna igu yidhi: Fadlan garsoore, kubbadda gacanta! … Waxaan ugu jawaabay: Fadlan ciyaar!”
Bin Nasser ayaa intaas ku daray, “Aniga ahaan, tani waxay ahayd 100% gool sida ku cad tilmaamaha FIFA.”
Lineker ayaa soo yareeyay farqiga u dhexeeya kadib markii uu gool u dhaliyay England sagaal daqiiqo ka hor dhamaadka ciyaarta, wuxuuna ku dhawaaday inuu dhaliyo goolka barbaraha.
Bin Nasser ayaa qirtay: “Markii xulka qaranka England uu gool dhaliyay, waxaan si qarsoodi ah u doonayay in ay dhaliyaan goolka bar-baraha.”
Wuxuu raaciyey, “Waxaan doonayey inaan ku raaxeysto kulankan 30 daqiiqo oo kale. Waxay ahayd madadaalo buuxda bilow ilaa dhamaad.”
“Inkasta oo kuleylka maalintaas, waxaan doonayay inay arrimaha sii socdaan, waxay ahayd ciyaar qurux badan oo dhex martay laba koox oo waaweyn,” ayuu raaciyay.
Markuu Maradona yimid Tunisia sanadkii 2015, wuxuu ku booqday Ben Nasser gurigiisa.
Garsooraha reer Tunisia ayaa yiri: “Waxaan u sheegay isaga, ‘Ma aheyn Argentina inay ku guuleysatay Koobka Adduunka sanadkaas, laakin wuxuu ahaa Maradona.”
Maradona ayaa ku jawaabay, “Adiga la’aantaada, ma aanan dhalin lahayn goolka qarniga,” sida uu yiri Bin Nasser.
Bin Nasser ayaa shaaca ka qaaday, “Wuxuu i siiyay funaanad saxiixan wuxuuna ku qoray:” Cali, saaxiibkeyga abadiga ah.